Quilted गद्दा रक्षक
तपाईलाई नुहाउने किन आवश्यक छ?
घर अतिथिहरूले तपाईंलाई विस्तारित भ्रमण तिर्न सक्छन्। तपाईं बाथरूमबाट तपाईंको कोठामा ड्यास गर्नबाट बच्न सक्नुहुन्छ जब तपाईंसँग लुगा तयार छ। तपाइँको गोपनीयता को आवश्यकता बुझ्दैनन् जो एक रिश्तेदार को लागी सही समाधान भनेको तपाइँलाई कभर राख्न लामो बाथरोब हो। H को लागी एक अतिरिक्त बाथरोब हातमा राख्नुहोस् ...
गद्दा रक्षकले के गर्छ?
गद्दा रक्षकले चार चीजहरू पूरा गर्दछ: गद्दा सफा राख्छ। मानव शरीर धेरै स्थूल छन्। हामी सबै राती पसिना निस्कन्छौं। हामी सबै हाम्रो छालाबाट तेल उत्पादन गर्छौं। हामी कोही मेकअप लगाउँछौं। हामी सबैले मृत छाला कोषहरू पनि बहाउँदछौं। त्यहाँ अन्य गतिविधिहरू छन् जुन दिमा "भिजेको ठाउँ" उत्पादन गर्न सक्दछ ...
तकिया रक्षक के हो र तपाईंलाई किन एक जना चाहिन्छ?
जब यो ओछ्यानमा आउँदछ, धेरै शिटहरू र तकियामा केन्द्रित हुन्छन्। जहाँसम्म, तपाईंको ओछ्यान संकलनको एक महत्त्वपूर्ण अंश छ जुन तपाईंको तकियाको आयु विस्तार गर्न सक्दछ: तकिया रक्षक। एक तकिया प्रोटेक्टर जिपरहरू बन्द, सामान्य एलर्जेनहरू विरूद्ध बाधा प्रस्ताव गर्दै ताकि तपाईं यो अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ ...